Global Voices teny Malagasy » FANAMBARANA: Global Voices Miantso ho amin’ny Fiarovana ny Blaogeran’i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2015 3:56 GMT 1	 · Mpanoratra Advox Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Bangladesh, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
“Iza indray no manaraka?” Tantara fohy momba ireo bilaogera maty ao Bangladesh nataon'i MadhuMondol.
Ny Global Voices dia miantso ny hifantohan'ny firaisamonina iraisampirenena amin'ny zava-manjò ny mpamaham-bilaogy any Bangladesh. Misy maty voavono ireo bilaogera , ary maro hafa no efa voatafika, iharan'ny fandrahonana ho faty ary hontsokontsonin'ireo mpitarika ara-pivavahana manana fotokevitra henjana noho ny zavatra nosoratany. Tamin'ity taona ity fotsiny, dia bilaogera telo no nisy  namono eny imasom-bahoaka.
Ny anaran'ireo mpamaham-bilaogy sy ny hafa nahazo fandrahonana dia hita ao amin'ny lisitry ny olona 84 natolotry ny mpitondra fivavahana silamo mpandala ny nentin-drazana ho an'ny komity manokan'ny governemanta, iampangana ny mpamaham-bilaogy ho “tsy mino ny fisian'Andriamanitra” sy nanoratra manohitra ny finoana silamo. Namaly tamin'ny fanakanana ireo tranonkala mpitsikera sy ny fisamborana  ireo mpamaham-bilaogy sy mpitari-pivavahana mitandro ny marina, nandritra ny fotoana nampamaivay ny hetsika #shahbag tamin'ny 2013 ny governemanta. Misy ireo seha-baovao malaza sasantsasany, anisan'izany ireo blaogy avy amin'ny elatra havanana, nampiely ny hevitra  fa ny blaogera rehetra no tsy mino an'Andriamanitra “manohintohina ny fahatsapana”  ara-pivavahan'ny Bangladeshis.
Mitovy zo amin'ireo olom-pirenena hafa ao Bangladesh ireo atheista. Ao amin'ny lalàm-pirenena, izay olona rehetra “minia” na “mamely ambadika” ny “fahatsapana ara-pivavahana” dia azo toriana eny amin'ny Fitsarana. Fa valin-kafatra mampihoron-koditra kosa ny herisetra sy ny famonoan'olona ataon'ireo mpanao andrimaso ary fanitsakitsahana ankitsirano ny lalànan'i Bangladesh. Na dia izany aza dia zavatra kely monja ny ataon'ny governemanta lahikan'i Bengladesh hanoherana ireo fanafihana na hitondra eny amin'ny fitsarana ireo mpamono olona.
Tsy misolovava na manao izany herisetra izany ireo blaogera ireo. Nanoratra ny fahasarotana sy ny fitongilanana ara-politika misy matetika ao Bangladesh ry zareo ary ny mahazavadehibe ny fanandratana ny zon'olombelona. Nampihatra ny fahalalahany maneho hevitra ry zareo, izay asandratry ny lalampanorenan'ny firenena  sy ny fampianaran'ny zon'olombelona iraisampirenena  izay mahampikambana an'i Bangladesh.
Global Voices  dia fikambanan'ny blaogera, mpikatroka, mpanoratra, ary mpandikatenin-dahatsoratra avy amin'ny firenena 137. Fototry ny iraka ampanaovina anay ny zon'olombelona manerantany hiteny malalaka. Miteny ireo tantara tsy tsara tatitra avy amin'ny vazantany efatry ny planeta izahay ary miaro ny zon'ny rehetra hiresaka malalaka tsy misy tahotra.
Misy namana sy mpiara-miasa amin'ny fikambanan'ny Global Voices amin'ireo olona 84 ao anatin'ny lisitra ireo. Misy ihany koa ireo blaogera sy mpikatroka an-tserasera tsy anaty lisitra saingy ahiana ny ain'izy ireo noho ny zavatra nosoratany na fahazotoan'izy ireo.
Feno fanahiana izahay amin'ny fiarovana ireo blaogera Bangladeshi ireo na ireo ao an-tanindrazany na ireo any ivelany. Melohinay ny famonoana ny blaogera tahaka an'i Ananta Bijoy Das, Ahmed Rajib Haider, Washiqur Rahman ary Avijit Roy ary miantso ny manampahefana izahay hanome antoka fa ho entina eny amin'ny fitsarana ireo tompon'andraikitra amin'ny famonoan'olona. Ary miantso ireo mpiara-dia aminay ao amin'ny fikambanana iraisampirenena miaro ny zon'olombelona izahay hanatevin-daharana amin'ny antso ataonay, sy hanao izay hiantohana ny fiarovana ireo ahiana ny ain'izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/05/26/70417/
 Misy maty voavono ireo bilaogera: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2015/05/13/ananta-bijoy-das-becomes-third-blogger-killed-this-year-in-bangladesh/
 lisitry ny olona 84 : http://bdnews24.com/bangladesh/2013/03/31/atheist-bloggers-to-repent
 fanakanana ireo tranonkala mpitsikera : https://advocacy.globalvoicesonline.org/2013/04/01/bangladesh-authorities-go-after-anti-muslim-bloggers/
 #shahbag tamin'ny 2013 : https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/bangladeshs-shahbag-protests/
 nampiely ny hevitra: http://www.huffingtonpost.com/2013/06/07/bangladeshi-media_n_3404525.html
 “manohintohina ny fahatsapana”: http://www.dawn.com/news/787676/bangladesh-cracks-down-on-anti-islam-blogs
 lalampanorenan'ny firenena: http://www1.umn.edu/humanrts/research/bangladesh-constitution.pdf
 zon'olombelona iraisampirenena: http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=22